China cgba Igwe Ọgwụ factory na-emepụta | Kingtai
MEDALS dị na nha dịgasị iche iche, site na 1 1/4 ″ ruo 3 ″ na dayameta.
Ọtụtụ nwere agba ma ọ bụ ọla edo, ọlaọcha ma ọ bụ ọla.
Bronze igwe kwụ otu ebe na usoro gbara gburugburu, Na mgbanaka iji jikọọ rịbọn ahụ.
Ihe osise nke ahaziri n’azụ medal.
A na-enweta ya na ọla edo, ọlaọcha ma ọ bụ ọla kọpa (ọla kọpa) oge ochie, MEDALS ndị a na-egosi ezigbo nkọwa zuru oke nke kpakpando dị mgbagwoju anya na-enye akara ngosi a na-ewu ewu ihe pụrụ iche ma saa mbara.
A na-akwakọ ihe ọ bụla n'ime akpa rọba maka nchekwa
Dị ka MEDALS anyị niile, MEDALS anyị bụ nke ezigbo alloys kama plastic.Ọ bụla nrite bụ ogo dị elu ma na-adọrọ adọrọ .Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhazi aha ahụ, anyị nwekwara ike ịhazi gị, anyị nwere ndị otu ọkachamara ndị na-emepụta ihe
Nke gara aga: EGO NA-EGO
Osote: EZI EGO